काठमाडौंका अस्पतालमा बेड अभाव : संक्रमित महिला एम्बुलेन्समार्फत धवलागिरि अस्पतालमा
बागलुङ । देशभर कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । दैनिक ७ हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिँदै गएपछि काठमाडौंमा अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि बेड नपाउने अवस्था आएको छ । बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिका–३ घर भई काठमाडौं बस्दै आएकी ३१ वर्षीया महिला काठमाडौंका अस्पतालमा बेड नपाएपछि एम्बुलेन्समार्फत बागलुङको धवलागिरि अस्पतालमा आएकी छिन् ।
काठमाडौंमा बेड नपाएपछि उनी ५० हजार तिरेर एम्बुलेन्समार्फत धवलागिरि अस्पताल आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका कोभिड–१९ फोकल पर्सन देवप्रकाश घिमिरेले बताए ।
धवलागिरि अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र वि.क. पोखरेलले काठमाडौंमा बेड नपाइएको खबरपछि ती महिलालाई बेडको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘काठमाडौंमा बस्दै आउनुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण भएको चार दिनपछि श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर अस्पतालमा बेडको खोजी गर्दा नपाएको खबर जिल्लामा आएकाले यहाँ आउन अनुमति दिएका हौं ।’ २५ शय्याको आइसोलेसन कक्ष रहेको धवलागिरि अस्पतालमा मंगलवार बिहानसम्म २० जना भर्ना भएका छन् । अस्पतालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७ जना कोरोना संक्रमित बिरामी भर्ना भएको निमित्त मेसु डा. पोखरेलले बताए । ‘संक्रमित बिरामी बढिरहेका छन्,’ उनले भने । अस्पतालमा भर्ना हुने धेरै बिरामीमा अक्सिजनको कमी देखिएको उनको भनाइ छ ।
दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले आइसोलेसनमा केही बेड थप्नेबारे छलफल भइरहेको निमित्त मेसु डा. पोखरेलले बताए । अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट भए पनि बिरामी बढ्दै जाँदा उपचारमा समस्या हुन सक्ने देखिएको छ । ‘तुलनात्मक रूपमा कोभिडका बिरामीलाई बढी मात्रामा अक्सिजन चाहिन्छ,’ निमित्त मेसु डा. पोखरेलले भने, ‘यस्ता बिरामी बढ्दै गएमा अक्सिजन प्लान्टले पनि धान्न सक्दैन, त्यसैले अक्सिजनका सिलिन्डर थप्नुपर्ने अवस्था छ ।’
घरको छतमा लटरम्म तरकारी[२०७८ बैशाख, ३१]
सिलिण्डर व्यवस्थापनमा जुट्यो गाउँपालिका[२०७८ बैशाख, ३१]
निषेधाज्ञाकै बीच तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम धमाधम हुँदै[२०७८ बैशाख, ३०]